နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: လရောင် ငတ်တဲ့ည (၄)
လရောင် ငတ်တဲ့ည (၄)
“တစ်နှစ်ထဲကို သုံးခါ ရှိပြီ...။”
ဒီမနက် ဖေဖေ့ကို ဇင်ဇင် အဲဒီ သုံးခါ ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးတာကို ဖေဖေက မဖြေပဲ စကားလမ်းကြောင်း လွဲသွားတယ်။ အရေးကြီးလို့ ဆိုပြီး စခန်းကို ထွက်သွားတယ်။ ကျောင်းကို တစ်ယောက်ထဲ ထွက်လာရတော့တာပေါ့။ ဒေါ့ဂျစ်နဲ့ ကျောင်းကို မောင်းလာခဲ့တယ်။ တောင်ပေါ်လမ်းတွေမှာ ဒေါ့ဂျစ်ကတော့ မောင်းလို့ ကောင်းတယ်။ ဇင်ဇင်တစ်ယောက် နည်းနည်းတော့ ရှက်နေတယ်။ ကားက ဆေးတောင် ကောင်းကောင်းမှုတ်သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘော်ဒီက အကြမ်းသာသာပဲ ရှိသေးတယ်။ ကိစ္စ မရှိပါဘူေးလ။ အိမ်နဲ့ ကျောင်းနဲ့က ဒီလောက် ဝေးတာ။ စီးစရာ ကားတစ်စီး ရှိတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
ဒီနေ့က ကျောင်းကို ပထမဦးဆုံး ထရန်စဖာနဲ့ သွားအပ်ရမှာ ဆိုတော့ စောစော သွားတာ ကောင်းပါတယ်လေ ဆိုပြီး လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ယူပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ နှင်းမှုန်တွက ခပ်ဖွဲဖွဲ ကျနေလေရဲ့။
ကျောင်းထဲကို ကားဝင်လာတော့ ကိုယ့်ထက် ကြိုရောက်နှင့်နေတဲ့ သူတွေ ရှိနေတာကို တွေ့တယ်။ ကိုယ့်ကားလဲ ၀င်ရော အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး စပ်စုတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်ကြတယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်း ကျောင်းကို ကားမောင်းလာတယ်။ မောင်းလာတဲ့ ကားကလဲ ဒေါ့ဂျစ် အစုတ်ဆိုတော့ မဆန်းပါဘူးလေ။
အားလုံးကို ဂရုစိုက် မနေပဲ ကျောင်းသားရေးရာကို သွားပြီး လုပ်စရာ ရှိတာကို လုပ်လိုက်တယ်။ ကျောင်းသားရေးရာက လိုအပ်တာကို ဆက်လုပ်ခိုင်းပြီး ဇင်ဇင် တက်ရမယ့် အတန်း၊ အတန်းချိန်ဇယား တွေ ထုတ်ပေးတယ်။ ဒီနေ့ အတန်းရှိတာပဲ။
အတန်းထဲကို မ၀င်ခင် ကင်တင်းမှာ သွားထိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက် အနားကို ရောက်လာတယ်။ ကျောင်းသူ အသစ် မို့လို့ လိုအပ်တာ ကူညီနိုင်ပါကြောင်း စကားလာရောတယ်။ ရန်သူထက် မိတ်ဆွေက ဒီအချိန်မှာ ပိုလိုအပ်တာမို့ စကားလက်ဆုံ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီကို အတော်ပေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာတာကို သိရတယ်။ ညီထွေးတဲ့။ တရုတ်ကလေး။ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပါတတ်တယ်။ ကျောင်းတွင်း အပ်ပျောက်တာက အစ ဘယ် အိမ်သာမှာ မီးလုံး ပျက်တာ အဆုံး သိတယ်။ သူနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တစ်ခြားသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ တော်တော်များများ ရလိုက်တယ်။
ကင်တင်းမှာ ညီထွေးရဲ့ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဆုံဖြစ်တော့ သူ အကုန် မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ကျော်ကျော်၊ လေးကို၊ သူဇာ၊ ထွေးလေး။ အဲဒီနေ့က ဘော်ဒါတွေ အများကြီး ရလိုက်တယ်။
ကင်တင်းမှာ ထိုင်နေတုန်း ညီထွေးက သိသင့်တာတွေ ပြောပြနေတယ်။
ရုတ်တရက် ကျောမှာ စိမ့်သလို ခံစားလိုက်ရတော့ နောက်ကို လှမ်းကြည့်မိတယ်။ သာမာန်ကျောင်းသားတွေနဲ့ မတူ နည်းနည်း ထူးခြားနေတဲ့ အုပ်စု တစ်စု ကင်တင်းထဲ ၀င်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ညီထွေးက “သင်းကွဲ အုပ်စု” တဲ့ နာမည်ပေးထားတယ်တဲ့။ သူတို့ သီးသန့် နေတတ်တယ်။ ဘယ်အုပ်စုနဲ့မှ မရောတတ်ဘူးတဲ့။ တစ်တွဲစီ ထိုင်နေကြတယ်။ လေးယောက်ပေါ့။ ဘာမှ မစားမသောက်ကြပဲ စကား ထိုင်ပြောနေတယ်။ နည်းနည်းတော့ ထူးခြားတာပဲလို့ စိတ်ထဲက အသိအမှတ်ပြုပြီး ၀ိုင်းထဲ ပြန်အလှည့်မှာ တံခါးဝက ၀င်လာတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို ထူးထူးခြားခြား သတိပြုလိုက်မိတယ်။ ဘာရယ်မသိ သူ့မျက်လုံးအကြည့်တွေက စူးရဲလွန်းတယ်။ ဇင်ဇင် မနေတတ် မထိုင်တတ်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ သူကတော့ ဇင်ဇင့်ကို မတွေ့ဘူး။ ခဏနေတော့ ခုနက သင်းကွဲ အုပ်စုနဲ့ သွားထိုင်နေတယ်။ ဇင်ဇင်တစ်ယောက် ဘာကြောင့်မှန်း မသိ... သူထိုင်နေတာကို တောက်လျှောက် ခိုးကြည့်နေမိတယ်။ (စွန်ရဲလို့ တိတ်တခိုး နာမည် ပေးလိုက်မိတယ်။)
အကြည့်သူခိုးကို လူမိသွားတယ်။ သူလဲ ဇင်ဇင့်ကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေတယ်။ မိန်းကလေးမို့ ကိုယ်က ဦးဆုံး မျက်နှာလွဲပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်စကားပြောနေလိုက်တယ်။ သင်းကွဲအုပ်စု အကြောင်း မေးတော့ အားလုံးက စကားမဆက်ချင်ကြဘူး။ သူတို့ ဘယ်ကလာတယ်၊ ဘယ်မှာ နေတယ်ဆိုတာကို ဇင်ဇင်တစ်ယောက် သိချင်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် စွန်ရဲ အကြောင်းကိုပေါ့...။
သူငယ်ချင်းတွေကတော့ လပြည့်ညက ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ လူသေမှုကို စိတ်ဝင်တစား ပြောနေကြလေရဲ့။ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းသံ ထိုးမှ လူစုခွဲဖြစ်တော့တယ်။
အဲဒီည ဇင်ဇင်တစ်ယောက် ဆက်မအိပ်နိုင်တော့ဘူး။
သင်းကွဲ အုပ်စုနဲ့ စွန်ရဲအကြောင်းကို သာ တွေးနေမိတယ်။
လပြည့်ကျော်ညကတော့ လရောင်တွေနဲ့ လင်းချင်းနေရမှာကို တိမ်တစ်ဆုပ်ကြောင့် မှောင်နေခဲ့တယ်။
အဲဒီညမှာ ဇင်ဇင်တစ်ယောက် လရောင်ကို ငတ်မွတ်ခဲ့တယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:27 PM
Labels: Moon, Moon Light, twilight
khin oo may December 17, 2008 at 4:42 PM
ခဏနေ စွန်ရဲနဲ့ ဇင်ဇင်နဲ့ငြိသွားမှာ ပေါ့ကွယ်။ ဒါလေးများ။ ..
g|-|0$7 December 30, 2008 at 4:40 PM
Twilight ရုပ်ရှင်အကြောင်းကို ပြန်ရေးတာလားဟင်?
Unknown December 30, 2008 at 5:46 PM
ခေမာရဌ် တမ်းချင်း (၃)
ကျေးဇူးပါ မေမေ။ (25 Dec '08)
Possible G-2 Anthroid Phone
FireFox Update 3.05
Email ထဲက ရတဲ့ ဟာသ။
လရောင် ငတ်တဲ့ည (၃)
လရောင် ငတ်တဲ့ည (၂)
Happy Birthday အမ်းမား
လရောင် ငတ်တဲ့ည (၁)
New Function in Blogspot?
Myanmar Telecommunication News
News Around The World (081208)
ပေါက်တတ်ကရ အိတ်တီ့ အပိုင်း(၈)
Nokia N97 (OR) I-Phone Killer ???